Phasianus gallus လင်းနီးယပ်, ၁၇၅၈
‌တောကြက် အဖိုအမတို့၏အသံသည် အိမ်ကြက်များ၏ အသံနှင့်တူ၏။ သို့‌သော် ကြက်ဖတွန်သံသည် တို၍ ပြတ်‌တောင်း‌တောင်းဖြစ်သည်။ ‌တောကြက်ကို အများအားဖြင့် ကျွန်း‌တောများတွင် ‌တွေ့ရသည်။ မိုးတွင်း၌ ‌တောနက်ရာသို့ ‌ရွှေ့‌ပြောင်း‌လေ့ရှိကြ၍ ‌ဆောင်းရာသီတွင် စပါးစိုက်သည့် လယ်‌တောနှင့်နီး‌သော ‌တောစပ်များသို့ ‌ရွှေ့‌ပြောင်းလာပြန်သည်။ စပါးရိတ်ပြီးချိန်တွင် နံနက်‌စော‌စောနှင့် ‌နေ့ခင်းပိုင်း၌ စပါးပင် ငုတ်တိုများကြားသို့ လာ‌ရောက်ကျက်စားသည်။ ‌တောကြက်သည် ပူအိုက်‌သော‌နေ့လယ်အခါတွင် အနီး အနားရှိ ချုံဖုတ်ထဲတွင် ခို‌အောင်း‌နေတတ်သည်။ ယင်း၏ အစာမှာ အသီးအနှံနှင့် ပိုး‌ကောင်များဖြစ်သည်။ ကြက်ဖတစ်‌ကောင်သည် ကြက်မ ၄၊ ၅ ‌ကောင်နှင့် အုပ်ဖွဲ့၍ ‌နေတတ် သည်။ ဝါး‌စေ့ကို အလွန်နှစ်သက်သဖြင့် ဝါး‌စေ့‌ပေါ‌သော‌နေရာ
↑ BirdLife International (2012). "Gallus gallus". IUCN Red List of Threatened Species 2012. IUCN.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တောကြက်&oldid=712524" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၉:၂၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။